Kobcinta koontaroolada waalidka ee macruufka iyo iPadOS iyadoo la siidaayo Waqtiga Isticmaalka API | Wararka IPhone
Angel Gonzalez | 02/08/2021 10:00 | La cusbooneysiiyay 30/07/2021 10:13 | macruufka 15, Noticias
macruufka 12 wuxuu soo bandhigay 2018 shaqooyinkii ku taxnaa magaca Waqtiga Isticmaalka ka dhig mid adeegsadaha ka warqaba isticmaalka aaladaha iyo sidoo kale inay isku dayaan inay dammaanad qaadaan fayoobaanta dhijitaalka ah. Gaar ahaan tixgelinta kororka tirada saacadaha ay dadku ku qaataan shaashadaha hortooda. Later, Apple waxay u isticmaashay sidii qalab loogu talagalay Xakamaynta waalidka. Dhowr bilood ka hor, gudaha WWDC 2021 waxaa lagu dhawaaqay furitaanka Waqtiga Isticmaalka API ee horumariyaasha, sidaas darteed u oggolaanaya qaab -dhismeed sharci oo loogu talagalay xakamaynta barnaamijyadooda.
Apple wuxuu u furayaa Waqtiga Isticmaalka API horumariyaasha
Soo -saareyaashu waxay u adeegsan karaan API -ga codsiyada xakamaynta waalidka si ay u taageeraan tiro balaadhan oo ah aaladaha waalidnimada. API -gu wuxuu siiyaa soo -saareyaasha astaamo muhiim ah sida xannibaadaha dhexe iyo la -socodka dhaqdhaqaaqa aaladda si asturnaanta loo kala hormariyo.
Barnaamijyo badan ayaa la bilaabay ilaa 2018 iyadoo la dhexgelinayo Waqti isticmaal ee deegaanka deegaanka Apple Waxaa looga saaray inay ku xadgudbeen xeerarka App Store. Qaar badan oo ka mid ah xeerarkaasi waxay ahaayeen is -dhexgalka xakamaynta dhaqdhaqaaqa oo ay sameeyeen dhinac saddexaad iyada oo aan gacanta dhexe laga hayn Apple. Laakiin si kastaba ha ahaatee, imaatinka Waqtiga Isticmaalka API, waxaa loo diyaariyay horumariyaasha qaab -dhismeed sharciyeed si loo hubiyo asturnaanta isticmaalaha.
Xusuusnow in Waqtiga Isticmaalka uu ka kooban yahay dhowr ikhtiyaar, oo ay ka mid yihiin: waqtiga aan firfircooneyn, had iyo jeer la oggol yahay, xaddidaadda adeegsiga barnaamijyada, xadka isgaarsiinta iyo xaddidnaanta. Shantan qalab ayaa u oggolaanaya isticmaalaha maaree xakamaynta wakhtiga aad ku qaadato qalabka hortiisa. Intaa waxaa dheer, ma aha oo kaliya iOS iyo iPadOS ayaa leh tan xirmo ee aaladaha, laakiin macOS sidoo kale wuu isku daraa.
Faa'iidooyinka furitaanka API Waqtiga hawada ee macruufka, iPadOS, iyo macOS ayaa inta badan ku dhaca waalidiinta. Iyagoo gacanta ku haya carruurtooda markay adeegsadaan aaladaha Apple:
Waxay baari karaan taariikhda taranka, daalacashada, iwm. Si looga hortago inay gaaraan muuqaallo aan loo baahnayn ama xayeysiisyo ku yaal aaladaha qulqulka.
Waxay ka jari karaan carruurtooda meel kasta oo ay u arkaan inaysan habboonayn.
Waxqabadyada maalinlaha ah waxaa lagala socon karaa taleefannada, kombiyuutarada ama kiniinnada.
Waxaa la oggol yahay in lala socdo fasallada iyo hab -raaca internetka ee carruurtaada.
Waqtiga shaashadda wuxuu ku siinayaa qalab aad u baahan tahay si aad uga caawiso waalidiinta iyo mas'uuliyiinta inay la socdaan isticmaalka shabakadda carruurtooda.
Beta-kii saddexaad ee loogu talagalay soosaarayaasha nidaamyada cusub ee Apple ku shaqeeya ayaa hadda la heli karaa
Sida laga soo xigtay Apple, qaab -dhismeedkan sharciyeynta API wuxuu u oggolaan doonaa soo -saareyaasha inay wax ka beddelaan waxqabadka barnaamijyadooda faasas kala duwan. Waxaa ka mid ah:
Ka warbixi xogta adeegsiga shabakadda
Ficil qaado marka waalidka ama mas'uulka xannibo URL ama uu bilaabo isticmaalka xannibaadaha
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Kobcinta koontaroolada waalidka ee macruufka iyo iPadOS marka la sii daayo Waqtiga Isticmaalka API
Telegram -ka waxaa lagu cusboonaysiiyay wicitaano fiidyow oo leh 1000 daawadayaal